izinkinga Sokujikeleza ukuthi unhlangothi, isifo sokuqina kwemithambo yegazi kanye nezinye izifo ezingathi sína kugcwele umhlaba wonke. Iziguli izifo ezifana, izakhiwo nesithakazelo umuthi ngethemba lokuthola izidakamizwa ephumelela kunazo. Zijwayelanise nendlela amaphuzu incazelo "Cinnarizine" izidakamizwa. Yokusetshenziswa esikhanyayo ngokuningiliziwe kulesahluko.
Izidakamizwa "Cinnarizine" zivimbela calcium engena amaseli, kuthinta imisipha abushelelezi imithambo kwehlisa ithoni. Okokuqala, ezithinta izitsha ebuchosheni, it has vasodilating umphumela. Ngakho ku blood pressure cishe hhayi kubonakala. Ukuze a izici nomuthi uyalandisa umsebenzi antihistamine. Nakuba abasebenza isakhiwo zobuchopho obangela nokudidiyela ukunyakaza, kunciphisa excitability we-apharathasi vestibular e.
izidakamizwa Iyatholakala "Cinnarizine" ngesimo amaphilisi noma amaphilisi, watusa umthamo umthamo - eyodwa noma ezimbili noma ezintathu amaphilisi kathathu nsuku zonke ngemva kokudla. Kuye uphethwe, ikhambi "Cinnarizine" ungakwazi ukuthatha izingane engu-nambili, kodwa umthamo kuyehla ngesigamu. Ukuze sensitivity high emuthini uqale ukwelashwa nge uhhafu umthamo, kancane kancane zandise ke. Ukuze kuzuzwe inzuzo egcwele ukuphathwa, ukunweba izinga. Kungathatha amasonto ambalwa noma izinyanga.
Izifo lapho zaphathwa izidakamizwa "Cinnarizine" imfundo manual Izingcingo ezilandelayo kubangelwa iziyaluyalu cerebral isifo kwegazi:
- ischemic unhlangothi futhi isimo emva unhlangothi (kuhlanganise haemorrhagic)
- isifo sokuqina kwemithambo yegazi,
- kuhlasimulise okulimala ebuchosheni.
Ngaphandle kwezidakamizwa "Cinnarizine" ukuthatha okudambisa izinhlungu zibe, neuropathy semithambo isifo occlusive futhi ukuthuthukisa kwegazi, isifo Raynaud, lapho izikhala ziya ayisesemikhulu izitsha emikhawulweni. Nale izidakamizwa, iziguli wazibonela ngcono kwegazi ezicutshini futhi izitho. Umuthi esithathwayo njengoba migraine ukuhlaselwa prophylactic.
Uhambo abantu abanale nkinga yokungadli kahle vestibular zingasebenzisa ithebhulethi "Cinnarizine." Yokusetshenziswa Lunikeza ke njengendlela yokuthola umoya futhi ulwandle ukugula, ekuqedeni izimpawu ezifana isiyezi, isicanucanu tinnitus, ukuhlanza. Kodwa kukhona umbono wezazi abakuxwayisa ngokumelene ngokuthatha izidakamizwa "Cinnarizine" njengoba enjalo. Kufanele kudokotela.
Izimo ethola izidakamizwa "Cinnarizine" kuyinto bekhulelwe nangenkathi bencelisa. Ngo-Parkinson ngokuthatha izidakamizwa Kunconywa ngokuqapha, ukuba ligweme izinkinga ezingase zivele. Lapho wethula imiphumela emibi lesi sidakamizwa "Cinnarizine" imfundo manual ibika ukuthi ukusabela okunjalo kungenzeka isimiso sezinzwa njengoba ukukhathala, ukozela, eliqhaqhazelayo kwamalungu omzimba, ngisho ikhanda.
izidakamizwa ithonya wokugaya ukudla, okubangela ukuqunjelwa, nomlomo owomile, jaundice cholestatic. imiphumela emibi izidakamizwa "Cinnarizine" isichasiselo unezela komzimba. Lapho overdoses zenzeka Isakhiwo sazamazama, iconsi ezinzima wegazi, ukozela, ukuhlanza. Mhlawumbe ukuwela equlekile. Ayikho yokuvimbela ethize ukhona. Ngakho-ke Kunconywa lavage esiswini.
Uma yokwelapha izidakamizwa is baqhubeka isikhathi eside ngokwanele, kudingekile Luhlolo zokulandelelwa izinso, isibindi, ukuzungeza neuropathy. Akunconyelwe abantu abathola izidakamizwa ngubani ukushayela izimoto futhi bekwi emisebenzini enjalo kangangokuthi zidinga ukunakekelwa okukhulu.
Izidakamizwa "Cinnarizine" unethonya elihle kwegazi cerebral kanye neuropathy, ingase ikhishwe kuphela iseluleko kadokotela.
Umuthi 'Female Viagra ": okubuyayo kuphela
Isisho "ngendlela efanayo ukuthi nanoma yiliphi inani lentengo": okushiwo nezibonelo
Ama-Movie, Biography Nikita Panfilov. ukuphila komuntu siqu, umkhaya umlingisi sika
I sikadali engcono: zokupheka, ukubuyekezwa. Ikhaya okusemathinini inyama. Sikadali Inkukhu kuhhavini